OPDO/ODP : Wal gahiirra jiru ammaaf mee ni eegna afachaa!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOPDO/ODP : Wal gahiirra jiru ammaaf mee ni eegna afachaa!!!
Wal gahiirra jiru ammaaf mee ni eegna afachaa
Dhaamsa Qeerroo !! Waliif dabarsaa !!Abdii fi carraan oromoon Obsee OPDO/ODP dhaaf waggaa tokkoo oliif kenne furmaata tokko malee dhumateera. Opdo’n ofii ishiifuu Bakka lamatti walqooddee wal diigaa jirti. Kayyoon Opdo karaa Dr.Abiy tiin kaayyoo G-7 ykn EZEMA Bakka bu’ee gara raawwii tti galmaa jira.Oromiyaa jedhanii sirbuun dhorkamuuf deema. Aggaammiin Injifannoo qabsoo Qeerroo oromiyaa sadarkaa olaanaa irra gahee ture Rakkoo hamaa keessa galee jira.
Keessaa halaa kan oromoo fi oromiyaa diiguuf qophii dhumaa irra jiru.
Qeerroon oromiyaa Hin rafiin dammaqi.Injifaannoo kee dabarsitee diinaaf Hin laatiin.Akkuma duraatti tokkummaan dhaabbadhuu falmadhu. Waan oromiyaa keessaa fi alaa deemaa jiru argaa jirta.
Guyyaa muraasaa booda qabsoon Qeerroo hanga galma yaadameef gahutti qabsoo itti muddi.
Qabsoon malee kadhaan Opdo irraa furmaanni Hin argamu. Qabsoon Qeerroo itii fufa.Qabsoon Qeerroo Marsaa 2ffaan bifa cimee fi Abdachiisaa ta’een guyyoota mursaa booda Ni eegala.
Waliif share godhaa .
Dhaabonni siyaasaa Oromoo amala jawwee keessaa bahuu qabu. Jawween guyyaa tokko waa liqimsinaan waggaa guutuu rafa. Umamni akkasii imaanaa ummata guddaa kanaa baachuuf hin dandeessisu. Dhaaba siyaasaa amala risaa qabu kan halaalatti waa arguu fi irribaan hin dagamne, kan waan fedhe osoo haalaa fi fageenyaan hin daangofne irraan bahee fudhachuu danda’u nu feesisa. Gaafa sana qofa Nafxanyaan nu kabajdi, nu sodaatti. Tokkummaa tokkummaa jenna malee dhibdeen dhaabota Oromoo dhimma tokkummaa dhabuu qofa miti. Hanqinni gahummaas ija baasee mul’ataa jira. Gahummaa fi wareegama kalee gumaachaniif galateeffannullee, milkoomina hegereef garuu ni yaaddofna. Oromoon hanqinoota akkasiin dhibamuu hin qabu. Waan haqa isaa kan ofii godhachuuf beekkomsaa fi dandeettii finiinaa haaraa ilmaan isaa walitti gurmeessee burqisiifachuun dhibdee bifa qormaata dhihaateef kana keessaa bahuu ni danda’a.
Warri Kamiisee hogagnoota keessan Amaarri akka itti taphattuuf jecha gara ሰሜን ሸዋtti dabarfaman abadan dabarsitanii hin kenninaa. Waliin waan taatan tahaa ittisaa. Warri bulchiinsaas karaa seeraan qaama oliitti gabaafadhaa. Naannoon Amaaraa Oromoo Walloo doorsisaa fi hiraarsaa akka fedhetti Finfinnee seenuu fi bahuunis kana booda gonkumaa hayyamamuu hin qabu. Qeerroon Salaalee imaanaan Oromoo Walloos sumarratti jigdee jirti. Dirmannaa keetiin Oromoon Walloo kabajama.